Hery Rajaonarimampianina : Ny fifidianana ihany no lalan’ny filaminana, azo atao ny mifampiresaka -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Ny fifidianana ihany no lalan’ny filaminana, azo atao ny mifampiresaka
15/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noho ny toe-draharaha misy eto amin’ ny firenena dia nanazava tamin’ ny vahoaka ny zava- misy marina, ary ny lalana tokony hizorana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tsapa tao anatin’ izay fanazavana nentiny izay ny mikasika ny filaminana ahafahana manatsara ny toe-karena izay fototry ny fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka isan-tokantrano. Noho izany dia niarahaba ny vahoaka ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ ny fitoniana izay miseho amin’ izao fotoana izao “ Miarahaba ny vahoaka tamin’ny fitoniana izay nasehony nandritra izay herinandro vitsivitsy izay. Ilaina ny fitoniana amin’ny fampandrosoana ny firenena. Mila fotoana ny fampandrosoana. Aza hadinoina fa itodiho ny zavatra niainana tany amin’ny 55 taona lasa. Rehefa nahazo ny fahaleovantena ny firenena dia velombolo, ary nanana ny maha izy azy i Madagasikara. Rehefa nandray ny fitondrana aho tamin’ny 2014 dia firenena voasazy no teo anoloako. Firenena nahatratra 92% ny tahan’ny fahantrana fadiranovana, no natrehiko, natrehantsika tamin’izany fotoana izany. Izany no nolovaintsika. Izany no iantsoana antsika vahoaka hoe ampy izany fahantrana izany fa mila mijoro, mila mitsangana isika hiaro izay efa fampandrosoana an’i Madagasikara. Mila miaina ao anatin’ny faharetana isika. Mila misintona lesona eo amin’ny tantara isika, mila mametraka fanontaniana isan’andro isan’andro isika hoe inona no vokatry ny korontana? Tsy fahantrana ve? Tsy fahasahiranana ve? Dia mitsotsorika midina ihany ve isika? kanefa ny firenen-kafa, izao tontolo izao dia manao lanja miakatra” hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izany toe-draharaha izany dia tsy nisalasala ny filoha nilaza ny tao anatiny manoloana ny zava-misy “Tao anatin’izay herinandro nolalovantsika vitsivitsy izay dia malahelo ny fon’ny Filoham-pirenena mahita ny fijalian’ny vahoaka indray ! fijalianareo mpivarotra manodidina ny kisanjan’ny 13 mey, ianareo mivelona amin’ny asa isan’andro noho ny korontana izay miseho. Ianareo mpanao asa tanana, mivelona amin’izany isan’andro ! andro iarahana amin’ny vahoaka afrikana izao”.
Nandritra ny fanzavana izay nentin’ny filoham-pirenena dia tsapa ny hafatra izay tiany ambara ny amin’ny tokony tsy hisaritana ireo ankizy mpianatra andeha higrevy “ Nandritra ny krizy 2009 dia 1 Tapitrisa no ankizy niala sy tsy tafiditra tany an-tsekoly, noho ny krizy ara-politika. Tao anatin’ny telo taona anefa dia tafaverina niditra an-tsekoly ireny. Ny zana-bahoaka foana no mizaka ny tsy eran’ny aina rehefa misy krizy. Kanefa tsy maintsy tsinjovina ireny” hoy hatrany ny fanazavana izay nentin’ ny Filoham-pirenena. Amin’ ny maha raiamandreny ny Filoham-pirenena moa dia nisy ihany koa ny antso avo izay nataony amin’ ny sehatra maro , nanao fanamby noho izany ny filoham-pirenena fa fifidianana tsara rindra sy madio no tanterahina eto amin’ny firenena. “Miantso ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka, na lehilahy, na vehivavy, na tanora, miantso ny mpiasa, ny mpiasam-panjakana, miantso ny mpampianatra, ianareo mpianatra rehetra, miantso ny mpitsabo, ny mpitsabo mpanampy, miantso ny mpitsara sy ny mpiara-miombon’antoka rehetra, miantso ny mpandraharaha, ny mpitandro filaminana, miantso ny mpanao gazety sy ny mpiserasera, miantso ny tanora, ny mpanao fanatanjahantena, miantso ny mpanakanto, ny rehetra eto amin’ny firenena, aoka hajaina ny lalàna. Aoka hajaina toa ny anakandriamaso ny lalàna, ny lalàm-panorenana fa izay ihany no antoka ny filaminana, ny antoka ho an’ny fampandrosoana. Ilaina izany ho an’ny firenena. Aoka ho fantatsika fa ny fifidianana ihany no lalan’ny filaminana, lalan’ny fampandrosoana……..Noho izany manao fanamby aho eto anatrehanareo fa fifidianana mbola tsara noho izany ao anatin’ny mangarahara no ilaintsika sy ataontsika amin’ity taona ity, koa manentana anareo amin’izany ny tenako. Andao isika hiara-miady, sy hiara-miasa, hiantoka ny hisian’izany fifidianana madio, mangarahara, handraisan’ny rehetra anjara izany. Ny Filoham-pirenena dia efa nanao fanamby fa hametraka izany fifampitokisana izany” hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Aoka izay ny herisetra, azo atao ny mifampiresaka
Mba ahafahan’ny firenena tsy ho tafalatsaka anaty haizina moa dia niantso ny tenany amin’ny tokony hipetrahan’ny fitonina foana eto amin’ ny tany sy ny firenena “aoka izay ny fifampihorohoroana na eo amin’ny teny na eo amin’ny fihetsika, na eo amin’ny hevitra satria tsy mampandroso ny firenentsika izany. Aoka ho eritreretina lalina izany. Mijoroa amin’ny marina, amin’ny ara-dalàna, aoka ny fihavanana no volena fa tsy ny fifandrafiana” hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampipanina. Noho izany dia nomarihin’ny filoham-pirenena fa misokatra amin’ ny adihevitra ny tenany, ahafahana mametraka ny tombontsoan’ ny firenena ho ambony. “Misokatra amin’ny adihevitra hametrahana fitoniana indrindra ny hiatrehantsika fifidianana ny tenako. Noho izany, ny Filoham-pirenena dia nametraka rafitra hiantsoana an’izany eo amin’ireo ambaratonga samihafa, eo amin’ireo andrim-panjakana samihafa. Tsy maintsy eo amin’ny latabatra boribory no hanaovana izany. Miantso anareo mpiantsehatra amin’izany aho, ary aoka ho ao anatin’ny toe-tsaina madio, ao anatin’ny fisandratan’ny tena tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan’ny maro an’isa no hametrahana izany” hoy hatrany ny antson’ny Filoham-pirenena. Tokony hohenoina noho izany ny vahoaka hoy ny filoham-pirenena. “Ny zavatra niseho tao anatin’izay herinandro vitsivitsy izay no efa nahitantsika, ary nanehoantsika fa malalaka ny fanehoan-kevitra ara-politika, na amin’ny endriny hafa eto amin’ny firenena. Maro ireo mpanao politika efa naneho ny heviny fa mbola mitoky mihoatra noho izany ny vahoaka maro an’isa. Ka aoka ny vahoaka malagasy no henoina, ary amin’ny fifidianana izy no afaka maneho izany”.
Niompana amin’ny fanomezana rano fisotro madio ho an’ny faritra Atsimo sy ny fampirantiana iraisam-pirenena ny taona 2025, ny dinika notanterahin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny minisi-panjakana misahana ny raharaham-bahiny Japoney Masahisa Sato omaly maraina. Nandritra ...Tohiny